Man City oo dirqi kaga adkaatay naadiga AFC Bournemouth. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Man City oo dirqi kaga adkaatay naadiga AFC Bournemouth.
Man City oo dirqi kaga adkaatay naadiga AFC Bournemouth.
Posted by: radio himilo August 26, 2017
Muqdisho – Kooxda Man City ayaa daqiiqaddii ugu danbeysay kasoo gudubtay dhiggeeda AFC Bournemouth ciyaar ka dhacday garoonka Vitality Stadium.
Naadiga City oo kulankan kii ka horreeyay barbaro kala kulantay kooxda Everton ayaa kulankan dhibcaha qaadatay in kasta oo ay u martay rafaad iyo shaqo adag kadib markii ay kasoo laabatay gool lagaga hormaray isla markaana ay natiijada dhankeeda marisay daqiiqadihii dhimashada.
Daqiiqaddii 13aad Charlie Daniels ayaa ka yaabsaday kooxda martida ahayd ee City, kubadda dhul madhacdo ah ayuu ku hubsay shaqa uu waardiyaha ka ahaa Ederson Moraes.
Kooxda macalin Josep Guardiola ayaa markeeda ceebta asturatay markii laacibka Gabriel Jesus uu kulanka natiijadiisa kusoo celiyay 1-1 daqiiqaddi 21aad ee ciyaarta, kubbad uu caawinteeda lahaa xiddiga reer Spain ee David Silva.
Qeytii hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-1, markii dib la iskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda Sky Blue ayaa dhamaadkii kulanka la timid goolka guusha waxaana u saxiixay xiddiga saddexda libaax ee Raheem Sterling daqiiqadihii dheeriga ahaa ayuuna kooxdiisa natiijada ku siiyay 1-2.
Kadib goolkaas Raheem Sterling ayaa qaatay calaamadda gaduudan isla markaasna waxa uu noqday ciyaaryahankii labaad ee ee qaata kaarka gaduudan tan iyo markii uu furmay horyaalka xagaagan waxaana ka horreyay Wolker oo qaatay kulankii Everton.
Vincent Kompany, David Silva, Nicolas Otamendi, Benjamin Mendy, iyo Raheem Sterling ayaa Muwaadiniinta ka qaatay caalamado, halka Nathan Ake Steve Cook, Tyrone Mings, Adam Smith iyo Harry Arter ay ka qaateen dhanka AFC Bournemouth.
Naadiga City waxa ay leedahay 7 dhibcood halka AFC Bournemouth aysan heysan wax dhibic ah.
Xaqiiqooyinki laga bartay kulankan.
– Bournemouth ayaa guul dareysatay saddex kulan oo xariir ah kulamada bilawga horyaalka tan iyo 1994-95.
– Gabriel Jesus ayaa ku lug leh 12 gool 11 kulan oo uu kusoo bilaawday Premier League waayihiisa Man City (sided gool iyo afar caawinaad ).
– Manchester City ayaa guuldaro la’aan ah 11 kulan oo Premier League ah iyadoo aan laga badinin markii ugu horeysay tan iyo bishii September 2015ka (W8 D3).
– Sterling waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League oocaalamda gaduudan lagu siiyo dabaaldega tan iyo Frédéric Piquionne kulan ay wada dheeleen West Ham iyo Everton bishii Janaayo 2011.
– Waxa uu u ahaa Sterling casaankii ugu horeeyay ee Premier League kulankii 162aad ee tartanka horyaalka ayuuna ciyaaray.
Previous: Paris Saint-Germain oo diiday dalabka Barcelona ee Angel di Maria
Next: Daawo sawirrada: Qoys gurigooda ku xanaaneeya Duur-joogta ugaarsiga ku dhiban.